Guddoomiye Cirrow nin qabiil feedhaha gashaa foosi kari-waa
Wednesday June 13, 2018 - 07:55:34 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Guddoomiye Cirrow nin qabiil feedhaha gashaa foosi kari-waa Hordhac
Colaadda Ceel-afweyn ee soo cusboonaatay, dabcan, dhinac keliya eeda ma wada laha, dhinaca kalena ceeb ka saliim maaha oo Ilaahay hortii khaladaad badan waa leeyihiin. Maaqaal kale ayaan kaga hadli doonaa taas. Hase yeeshee, qoraalkan kooban waxaan ku tilmaamaynaa waxaa hadda ladhkeeda soo kiciyey, meesha xadhigu ka xidhmi la' yahay Iyo doorka weyn ee ay ku leedahay guuldarradii ku timi xisbiga Waddani iyo sidoo kale waxaa la gudboon guddoomiye Cirro.
Colaadda iyo saameynta guuldarradii xisbiga Waddani
Markii natiijadii doorashada lagu dhawaaqay, waa kuwii taageerayaasha gobolka Sanaag ee xisbiga Waddani isla oogsaday ee qawlalada ka xunbeynayey ee lahaa ma aqbalayno natiijada. Waa kuwii xisbi qoys ka dhigay xisbi qarameedkii ee cid walba yaabtay ee waji gabaxu ku dhacay xitaa kuwii u codeeyey ee ka soojeeday deegaanada kale.
Waa kuwii sidoo kale, dhawaan qabtay shirkii dhagaraysnaa ee Goof ka dhacay. Shirkaas oo ay ka dhex muuqdeen masuuliyiinta xisbiga Waddani.
Waakan guddoomiye Cirro na ka sarriigan waayey ee iska leexin waayey foolxumadaas.
Waxaa la gudboon Cirro
Guddoomiye Cirrow, nin qabiil feedhaha gashaa foosi kari-waa, ee mudane, Siyaasadda qaawan ee qoyska ku dhisan marbay tagoogada kaa jabisay ee mar kale yaanay guuldarro kale kuu horseedin.
Waxaad u baahantay inaad wax ka baratid madax weynihii hore ee Axmed Siilaanyo markuu mucaaridka ahaa siduu u xakameyn jiray caadifaddii taageerayaashiisii ay isku deegaanka ka soojeedeen. Iyo siduu isugu hawli jiray inuu kasbado deegaan walba, oo uu xaqiiqdiina ku guuleystay. Illeyn deegaankiiso oo keliya kursiga ma saarin ee waxaa u codeeyey Soomaalilaan intii badnayd'e.
Sidaas oo kale guddoomiye waxaa kula gudboon xeelad iyo xod xodosho si aad u hantidid quluubta deegaannada oo dhan.
Bal haddii taageerayaasha deegaankaagu cod-bixiyaashii qaarna ku duulaan, qaarna caayaan oo yidhaahdaan kursi xaaraana ayaad ku fadhidaan! Yaa kuu codeyn.
Haddii aadan xakamayn karayn caadifada deegaankaaga ... waxaa jira rag kaloo badan oo aad isku deegaantihiin oo hawshan hoggaamiyaha ku fiican ee ka hor bannee.
Baroortu orgiga ka weyn. Colaadaasi waa mid siyaasadaysan oo lagu raad-gadanayo. Markay sidaas tahayna Ilaahay ka sakow cidda ugu habboon ee wax ka qaban kartaa waa guddoomiye Cirro.